Ranon-tantely : Misoroka “allergie”, mampihena…
Fantatrao ve fa manome hery noho ny kafe sotroina vao maraina ny ranon-tantely 1 vera ? Sady manadio ny ao anaty no mamelombelona izy io, tsy atahorana hankarary mihitsy satria akora biôlôjika ny tantely. Afangaro amin’ny rano izy dia mitondra vokatsoa marobe.
Smoothie akondro sy sakamalaho, mandoro tavy
Mety ary azo atao ny mampihena tena amin’ny alalan’ny smoothie, araka ny fanadihadiana natao tany ivelany mahakasika ny atao hoe : « médecine naturophatique ».
Karaoty + mananasy : misoroka varisy
Araka ny salan’isa nambaran’ny ivon-toerana espaniôlina misehatra momba ny “phlébologie” na ny fahasalaman’ny lalan-drà, dia ny 30%-n’ireo mponina eran-tany no miaina olana maharitra eo anivon’ny lalan-drà. Indro àry ny torohevitra hisorohana ny hipoiran’io fanelingelenana io.
Afa-jaza matetika, fa maninona?
Indro ny tohin’ny fandaharana Taiza Vatana omaly, tao amin’ny TOP RADIO 102.8, momba ny voka-dratsin’ny fanalan-jaza sy ny tokony hatao.
Voanjo : Mahasalama fa ferana ny fatrany
Amin’ny vanim-potoana mampangatsiaka ny andro tahaka izao no tena mahabe mpihinana ny voanjo. Marobe ireo fomba azo hihinanana azy amin’izao : fonosina siramamy dia endasina, totoina, ilaofana… Indro ny fomba fihinanana azy tsara, higohana ny vokatsoa entiny.
« Sésame » : Mampitony ny fanaintainan’ny fadimbolana
Sakafo mahasalamana , mety ho an’ny olon-drehetra, ny « graines de sésame ». Na hanina amin’izao, na hatambatra amin’ny sakafo, dia maro ireo tombontsoa entiny,
Tongolo gasy voatetika madinika
Tongolo oignon voatetika madinika
Sakamalaho kely voakiky
Sakay vovony 1 tsongo
Fomba ikarakarana azy
Arotsaka ao anaty bocal iray avokoa ny tongolo gasy, ny tongolo oignon, ny sakamalaho ary ny sakay vovony. Tondrahana ny vinaingitra. Hidiana tsara ny bocal. Ahontsana isan’andro mandritry ny 2 herinandro. Dila izay dia vonona ity ody gripa ity.
Iray sotro isa-maraina, mialoha ny sakafo maraina ny fomba ihinanana azy.
Mety ihany koa raha afangaro amin’ny tantely 1 6 sotro ny tongolo gasy 3 vaventy voatetika madinika. Alona andro vitsivitsy dia tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana. Iray sotro isa-maraina mialohan’ny sakafo no hihinanana azy. Tokony ho sitrana ao anatin’ny 7 andro raha voan’ny sery na gripa. Ity farany ity rahateo dia mitsabo kohoka sy ireo aretina avy amin’ny “infections”.